Xog-Dahsoon:3 Qorshee ee ay Ethiopia ka leedahay Soomaaliya & Madaxweyne Gaas oo Horseed u Noqon kara. – Xeernews24
Xog-Dahsoon:3 Qorshee ee ay Ethiopia ka leedahay Soomaaliya & Madaxweyne Gaas oo Horseed u Noqon kara.
Cabdi Weli Maxamed GAAS,madaxweynaha maamulka Puntland ayaa booqasho aan horey loo sii shaacinin ku aaday waddanka Itoobiya.
Safarka madaxweyne GAAS ayaa lagu sheegay mid ku aadan wada-hadal dhanka ammaanka iyo dhaqaallaha ah oo ay Puntland la yeelaneyso xukuumadda Itoobiya.
GAAS ayaa safarka Itoobiya kadib sii aadi doona dalka Issu-tagga Imaaraatka Carabta oo uu kala dhaxeeyo xidhiidh qoto-dheer oo dhanka dhaqaallaha ku Qotoma.
Haddaba, dad badan ayaa isweydiinaya sababta uu GAAS u aaday dalka Itoobiya, xilli la filayay in dowladda cusub ee Farmaajo ay wax ka baddeli doonto awoodaha maamul goboleedyada ee dhanka diblomaasiyadda.
Laakiin shabakaddaha wararka ee Soomaalida oo xog-raadin kala duwan la sameysay siyaasiyiin reer Puntland ah ayaa qallinka u qaadateen sababaha uu GAAS u aaday Itoobiya.
Waxaan ogaannay in dowladda Itoobiya ay iyadu casuuntay madaxweynaha Puntland,isla markaana ay kala hadli doonto arrimo badan oo quseeya siyaasadda Soomaaliya.
1-Itoobiya oo u arragta Puntland mid ay ku curyaamin karto Farmaajo:
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya,mudane Maxamed Cabdullahi Maxamed Farmaajo ayaa ah shakhsi lagu tilmaamay mid aanan u dhego-nugleyn dalabyada waddamada shisheeye gaar ahaan kuwa deriska, siiba dalka Itoobiya, waana sababta shaki loo gelinayo xidhiidhka labada dal.
Laakiin dowladda Itoobiya ayaa sida la ogaaday billowday dadaal kasta oo si diblomaasiyeysan ay ugu curyaamin karto maamulka Farmaajo, waxayna xiidhiidha hoose la yeelatay maamullada dalka,gaar ahaan Puntland.
Itoobiya ayaa Puntland ku cadaadin doonto inay si un uga soo horjeesato siyaasadda cusub ee lagu dhisayo ciidanka qaranka Soomaaliya oo ay u arragto halista ugu badan ee ay wajaheyso qarnigan, laakiin lama ogga go,aanka uu GAAS ka qaadan doono dalabkaas,waxayse warbaahinta Soomaalidu rajeyneysaa inuusan caqabad ku noqon doono dowladnimada Soomaaliya.
2-Itoobiya oo shaki ka qabta Imaaraatka:
Sida ay Puntland dhowaan shaacisay waxaa gebo-gebo maraya saxiixa heshiis ay shirkad Imaaraat ah kula wareeggeyso dekadda Boosaaso.Itoobiya ayaa ku xajiimoota dhaq-dhaqaaqa uu dalkan reer Carbeed ka wado dalka Soomaaliya, sidaas darteed, Gaas ayaa heshiiskan ku soo qanci doono dowladda Xabashida si ay uga soo reebto ama ugu soo darto qodobada ay iyadu dooneyso.
3-Hub loogu yaboohi doono Puntland:
Sida dhowaan la shaaciyay, dowladda Itoobiya ayaa saannad hub ah ka dejisay magaalada Kismaayo,taasoo uu si dadban uga qeylo-dhaamiyay madaxweynaha Hir-shabeelle Cosoble.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa rumeysan in Itoobiya ay ku dhaqaaqeyso siyaasad ku dhisan hubeyn iyo iska hor-keenid shacab si ay dowladda Farmaajo uga mashquusho howlaha dib u dhiska ciidan iyo hagaajinta dhaqaallaha dalka.
Itoobiya ayaa ka wel-welsan inuu caalamka ka goosan doono dhaqaallo badan oo ay hesho haddii ay Soomaaliya degto,kadibna ay yeelato ciidamo xoggan oo looga kaaftoomi karo ciidanka aan sharciga ku joogin ee Itoobiya.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/03/gaas.jpg 249 202 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-03-10 22:00:392017-03-10 22:04:50Xog-Dahsoon:3 Qorshee ee ay Ethiopia ka leedahay Soomaaliya & Madaxweyne Gaas oo Horseed u Noqon kara.
Daawo Cuqdada iyo Caabuqa oodda soo Jidhay